အိုးဝေ: Intuition of space: Sculpture
Intuition of space: Sculpture
Интуиция пространства: скульптура
St. Petersburg မြို့ရဲ့ Михайловский замок (Mikhailovsky Castle) ထဲမှာ Сергей Борисов(Sergei Borisov)ရဲ့ Интуиция пространства: скульптура (Intuition of space: Sculpture) ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ပြပွဲတခုကို ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ Sergei Borisov က 1966 ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့ သူ့လက်ရာတွေတင်ထားတဲ့ နေရာတခုကို ဒီမှာတွေ့ပါတယ်။ Mikhailovsky Castle အဝင်ဝမှာ ရေးထားတဲ့ စာတွေရဲ့ ပထမအပိုဒ်ကို ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။
Пространство само по себе пустота, но только помещенный в него предмет придет ему качество. Тем более человек в пространстве. Все ассоциации, напряжения и провалы, аллюзии – всё суть ощущения пространства, интуиции человека, зрителя. Чем богаче, многослойнее этот процесс, тем более насыщен художественный образ.
ဟင်းလင်းပြင်ဆိုတာ သူချည်းသက်သက်ဆို အနှစ်သာရမရှိသလိုပဲ၊ အဲ သူ့ထဲကို အရာဝတ္ထုတစ်ခုခု ပေါင်းစပ်ဖြည့်စည်းလိုက်မှ သူ့ဂုဏ်သတ္တိက ပေါ်ထွက်လာတယ်။ သိသာတာတခုက ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာ လူသားတွေရှိနေတယ်လေ။ ပေါင်းစပ်မှုတွေ၊ အားစိုက်မှုတွေ၊ ကျဆုံးမှုတွေ၊ ရင်းနှီးမှုတွေ..စတဲ့အရာအားလုံးဟာ ဟင်းလင်းပြင် ခံစားမှုရဲ့ အနှစ်သာရ၊ လူသားတွေ၊ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဖြတ်ခနဲစေ့ဆော်မှုရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာလေလေ၊ တနည်း ကြွယ်ဝလာလေလေ၊ အနုပညာလက်ရာဟာ ပိုပြီး ရသပြည့်ဝလေလေပါပဲ။
Композитные материалы, металл, неон
Composite materials, metal, neon
နာမည်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်လာတာ အလင်းပြန်သွားလို့ စာလုံး ၂ လုံးလောက်ဖတ်မရပါဘူး။
Композитные материалы, металл
Composite materials, metal
Let's go. 1999
Железный ветер. 1999
Охота на китов. 2000
Металл, сварка, краска
Hunting cetacea. 2000
Metal, welding, paint
Posted by ဇနိ at 5:08 PM
တားမြစ် ထားသော... August 16, 2008 at 6:46 AM
ဟင်းလင်းပြင်နဲ့ အနုပညာ ရောယှက်ပြထားတဲ့ အတွေးကို သဘောကျတယ်။
ပုံတွေလည်းကြည့်သွားတယ်။ အနုပညာနှင့်ဝေးသလိုပါပဲ၊ နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို (အထိမ်းအမှတ်၊ ဖန်တီးမှု၊ ခံစားချက်ကို ပုံဖော်ထားသော..) ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိပါ၊ သဘောကျပါတယ်။
မောင်ဖြူ August 16, 2008 at 9:52 AM
ကိုဇနိရေ ဒီပို့စ်လေးကိုသဘောကျတယ်။ Spanish surrealist Salvador Dali ရဲ့ အဲလိုပန်းချီတွေတော့တွေ့ဖူးတယ်။ ခုလို welding တော့ ခုမှတွေ့ဖူးတယ်။ ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပါ။
khin oo may August 16, 2008 at 10:18 PM
စိတ်ဝင်စားစရဘဲ. Republic အကြိုက်ပေါ. ခေါင်းစားတယ်။
ဆောင်း August 17, 2008 at 9:14 AM
ဒေသနတရ ဗဟုသုတတွေ ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
Republic August 17, 2008 at 11:10 AM
ကိုနိ .. ကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့ ပုံတွေလား ၊၊ မိုက်တယ် ၊၊ပုံတွေမှာ idea တွေပါတယ် ၊၊
tmn August 19, 2008 at 7:30 PM
one million kiss
အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အသက်ရှုရပ်ခြင်းပြဿနာ (Obstructiv...
St. Petersburg သို့ အလည်သွားခြင်း - ၃
St. Petersburg သို့ အလည်သွားခြင်း - ၂
St. Petersburg သို့ အလည်သွားခြင်း
A. P. Chekhov by Mya Than Tint